Alaabta guryaha ka samaysan ee caaga ahi waxay noqdeen xoog ku cusub warshadaha qalabka guryaha
Hoyga > Wararka > Wararka warshadaha > Alaabta guryaha ka samaysan ee caaga ahi waxay noqdeen xoog ku cusub warshadaha qalabka guryaha
Iyada oo kor loo qaadayo dalabka ilaalinta deegaanka, "qoryaha caaga ah" ayaa soo socota, alaabta balaastikada ah oo leh cod midab leh iyo qaabka naqshadeynta moodada ah ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya xoogga cusub ee warshadaha alaabta guryaha. Sanadihii la soo dhaafay, noocyada waaweyn ee balaastigga sare alaabta alaabta guriga ayaa sii wadata soo bandhigida, istiraatiijiyad suuqa alaabta guryaha ka sameysan oo isticmaalkeedu hooseeyo dhamaadka si tartiib tartiib ah ugu wajahan horumarinta suuqyada macaamiisha dhamaadka-sare.
Mid, alaabta guriga ka samaysan ee balaastigga ah ayaa dhalaalaya
Maalmahan, noocyada alaabta guryaha ka sameysan ee balaastigga ah ee quseeya qoyska lama xisaabi karo: Miiska cuntada, kabadhka, baaldiga bariiska, sanduuqa lagu keydiyo sanduuqa, weelka lagu dhaqo, kabaha sugaya in alaabadaas balaastigga ahi ay leeyihiin waxqabad aan ahayn oo keliya, welina ay yihiin qurxinta bilicda qolka jiifka
Tusaale ahaan miiska balaastigga ah iyo midabka kursiku waa midab dhalaalaya oo hodan ah, fudud oo ku habboon, barta dhalaalaysa ee isku laaban kartaa waxay u oggolaanaysaa carruurta inay si kalgacal leh u jeclaadaan. ku dar madadaalo badan.
Marka la barbardhigo kabadh dhaqameedka keydka, keydka balaastigga ah wuxuu leeyahay qaabab badan oo muuqaal ah, waana mid aad ugu habboon in la furo ama la dhaqaajiyo keydka keydka, isku xirnaanshaha midabka iyo qaabeynta ayaa si aad ah isugu duuban. u fiirso iftiin iyo wax ku ool ah, wuxuu dhigi karaa maryo maalinle ah si aad weli awood ugu yeelatid wax yar oo la jecel yahay oo keliya ma aha oo keliya, maradaas oo dhigaya muddo dheer waxaa loo qaadaa hawo hawadeed oo aad ugu habboon.
Laba, rajada suuqa alaabta guryaha ka samaysan ayaa rajo wanaagsan leh
Sannadihii ugu dambeeyay, qalabka guryaha ee balaastiggu wuxuu soo bandhigayaa kala-duwanaansho, xaalad kala-duwanaansho ganaax ah Isbedelka fikradda isticmaalka iyo astaamaha iyo kala-duwanaanta baahida alaabta guriga, qalabka guryaha ee balaastigga ah ayaa caan ku ah jiilka da'da yar. Sanadihii la soo dhaafay, nashqadeeyayaal badan iyo shirkadaha qalabka guryaha ayaa bilaabay alaab guri oo balaastig ah oo leh waxyaabo hodan ku ah The Times, iyo qalabka guryaha ka sameysan ee balaastigga ah ayaa si tartiib tartiib ah u noqonaya "keeggii weynaa" ee ay degenaayeen kooxaha waaweyn ee guryaha.
Xiga:Qalabka qalabka guryaha ee xafiiska ayaa u baahan inay isticmaalaan maxay?